Rayson | cheap full size matarasị na igbe spring
Memory ụfụfụ na matarasị na-ghọtara maka ike ka ha webata na contours nke sleeper ahụ na-akwado ahụ okpomọkụ, nke na-atụ aro na ọ na-enye ahaziri mgbe enyemaka n'agbanyeghị ụra style - ihe na mgbe na-aga n'ihu / Bonnell volute spring matarasị nnọọ ike imeta. The ime eduga elu spinal itinye n'ọnọdụ na ma Aka na-egbochi sciatic mgbu.
Memory ụfụfụ si viscoelastic ọdịdị na-enye ohere ya zaghachi mgbali nnọọ nọ n'ógbè unu, nke sụgharịta n'ime magburu onwe ngagharị iche
anwụ ngwa ngwa
Dị ka e kwuru n'elu, na sturdiness nke a na ebe nchekwa ụfụfụ matarasị na-na-ejikọta ya na ya njupụta - mgbe 4 lb./cu.ft. bụ na kacha nta ị kwesịrị ịhụ n'ihi na ọ bụrụ na ị na-achọghị ka ahụmahụ sag n'ime isi afọ dị, anyị nwere ike ikwu na-aga n'ihi na a kacha nta nke 5 lb./cu.ft. ma ọ bụrụ na ị ga-achọ a ngwaahịa nke ga-adịru n'ezie ogologo.
Rayson azụlitewo ịbụ onye ọrụ emeputa na a pụrụ ịdabere soplaya nke elu-edu ngwaahịa. Dum mmepụta usoro, anyị na-erube nnọọ mejuputa ISO quality management usoro akara. Ebe ọ bụ na ike, anyị na-rube isi onwe ha ọhụrụ, na nkà mmụta sayensị management, na-aga n'ihu mma, na-enye elu-edu ọrụ izute na ọbụna gafere ahịa 'chọrọ. Anyị na-ekwe nkwa anyị ọhụrụ ngwaahịa ọnụ ala full size matarasị na igbe mmiri ga na-ewetara gị a otutu uru. Anyị na-mgbe na njikere na-enweta gị ase. cheap full size matarasị na igbe spring Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị ọhụrụ ngwaahịa ọnụ ala full size matarasị na igbe mmiri na ndị ọzọ, na-anabatanụ gị kọntaktị us.The imewe nke Rayson cheap full size matarasị na igbe spring bụ a Nchikota dị iche iche ọcha. Ha na-edoghi, hà, agba, na ákwà udidi, uwe na-ewu, ike aesthetic uche, wdg
N'ihi ya, anya, Rayson mechaa mba quality management usoro asambodo. All ngwaahịa gụnyere anyị ọhụrụ ngwaahịa na-ọnọ na otutu imewe, na-ekwe nkwa àgwà, na mpi ahịa.
Anyị nditịm eso ọkọlọtọ àgwà akara Filiks iji hụ anyị ngwaahịa izute ma ọ bụ gafere ahịa anyị 'na-atụ anya. Ke adianade do, anyị na-enye mgbe-sales ọrụ maka ndị ahịa gburugburu ụwa dum.
Ebe ọ bụ na ike, Rayson Aims-enye ohere pụrụ na nnukwu ngwọta maka ahịa anyị. Anyị ike anyị R & D center maka ngwaahịa imewe na ngwaahịa mmepe.
Ka m gara na gị factory?
Ee, na-anabatanụ ileta anyị factory n'oge ọ bụla, anyị na-nso Guangzhou Baiyun mba ọdụ, ọ dị nnọọ otu hour site ụgbọ ala, na anyị pụrụ ime ndokwa ụgbọala eburu gị.
Olee otú ogologo kwesịrị gị matarasị ikpeazụ?
Kwa matarasị bụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ị amali elu n'abalị ma ọ bụ na-eteta na mgbu ọ bụ oge iji nweta a ọhụrụ matarasị n'agbanyeghị ya afọ. Anyị na-akwado ile iwu mkpado na-eji dochie dịkarịa ala ọ bụla afọ asatọ.
Olee otú m ga-esi ụfọdụ samples?
Mgbe ị na-egosi na anyị na-enye na-eziga anyị na sample-eri, anyị ga-rụchaa sample n'ime 15 ~ ụbọchị 20. Ị nwere ike ịjụ awara awara ụlọ ọrụ na-bulie sample si anyị ụlọ ọrụ ma ọ bụ i nwere ike na-eziga anyị DHL, FedEx ma ọ bụ gbasie nnata nọmba akaụntụ, anyị nwere ike izipu ihe sample gị site na akaụntụ gị.